နေ့စဉ်အကြောင်းအရာများပြောဆိုခြင်း နှင့် တွေ့ဆုံရန်ချိန်းဆိုခြင်း - Myanmar Network
Posted by Language Republic on October 17, 2012 at 11:19 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Everyday matters - နေ့စဉ်အကြောင်းအရာများပြောဆိုခြင်း
Hope you’re feeling better. I heard from Jack that you had flu. I’m sorry to say that I haveaproblem next week. Tina’s on holiday and I have to cover for her so I won’t be able to see you on Thursday. I’ll call you later and we can arrange an alternative date.
မင်းနေကောင်းလာပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်းတုပ်ကွေးမိနေတယ်လို့ ဂျက်ဆီက သိရတယ်။ ပြောရမှာ စိတ်မကောင်းပေမဲ့ နောက်အပတ်မှာ ငါ့အတွက် ပြဿနာရှိနေတယ်။ တီနာက အားလပ်ရက်ယူထားတော့ သူ့အလုပ်တွေငါ လုပ်ပေးရမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကြာသပတေးနေ့မှာ မင်းနဲ့ ငါ မတွေ့နိုင်ဘူး။ နောက်မှ ဖုန်းဆက်လိုက်ပြီး အခြားရက်တစ်ရက်ကို စီစဉ်ကြတာပေါ့။
ဒါကတော့ အီးမေး(လ)ရဲ့အစမှာ အများသုံးလေ့သုံးထရှိခဲ့ ရင်းနှီးသော အသုံးအနှုန်းပင်ဖြစ်သည်။ မက်စေ့(ဂျ)တစ်စောင်၏အစ၌ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏နာမည်ကိုတပ်ခြင်းဖြင့်လည်း ရိုးရှင်းစွာ အစပျိုးနိုင်ပါသည်။
အခြားသော အဖွင့်စကားစုများမှာ -
- Just to let you know that………(………..ကို မင်းကို အသိပေးရုံသက်သက်ပါ။)
- Sorry to hear about….........(…………..အကြောင်းကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။)
- Thanks for the message. (မက်စေ့(ဂျ) အတွက် ကျေးဇူးပဲ။)
to cover for ဟူသော စကားစုသည် “တစ်စုံတစ်ယောက်မရှိခိုက် ထိုသူ၏ အလုပ်ကိုလုပ်ပေးခြင်း”ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
- Who’s covering for you? (မင်းရဲ့အလုပ်ကို ဘယ်သူလုပ်ပေးနေလဲ?)
- We’re so short-staffed that there is no one to cover for me. (ကျွန်တော်တို့မှာ
၀န်ထမ်းအင်အားနည်းလွန်းလို့ ကျွန်တော့်အလုပ်ကို ကိုယ်စားလုပ်ပေးမဲ့သူ မရှိဘူး)
အောက်ပါတို့သည် နောက်မှ ဆက်သွယ်လိုက်မယ်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ဆောင်ပါသည်။
- I’ll send youamessage later. (နောက်မှ မက်စေ့(ဂျ)ပို့လိုက်မယ်)။
- Call me when you get this message. (ဒီအမှာစာရရင် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။)
A future meeting - တွေ့ဆုံရန်ချိန်းဆိုခြင်း
It was good to see you again last week. Let me know when you’re next going to be in Salzburg and we’ll arrangeanight out. There are some excellent restaurants here.
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က မင်းကို ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဆယ်(လ)(ဇ)ဘာ့(ဂ)ကို နောက်တစ်ခါ မင်းဘယ်တော့ လာဦးမလဲဆိုတာ ငါ့ကိုအကြောင်းကြားပါ။ ပြီးရင် ညပိုင်းအပြင်ထွက်ပို့ စီစဉ်ရအောင်။ ဒီမှာကအရမ်းကောင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေရှိတယ်။ မင်းဆက်သွယ်လာမှာကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
Regards မှာ အဆုံးသတ်ရန်ရင်းနှီးသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ အခြားသော အသုံးအနှုန်းအချို့မှာ -
- You must visit us again soon. (မကြာခင် နောက်ထပ်လာလည်ပါဦး။)
- It was great to see you. (ခင်ဗျားနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။)
- See you again soon. (မကြာခင် ထပ်တွေ့ကြတာပေါ့)
(I look forward to hearing from you - မင်းဆက်သွယ်လာမှာကို စောင့်နေမယ်) ဒီစကားစုဟာ စာစကား၊ ရုံးစကားဆန်ပေမဲ့ အီးမေး(လ)တွေမှာ မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ အောက်ပါကိုလည်း အသုံးများပါတယ်။
- I look forward to meeting / seeing you. (မင်းနဲ့ဆုံဖို့ / တွေ့ဖို့ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။)
Permalink Reply by Ei Min Myat on October 17, 2012 at 11:58
How nice this is!
Permalink Reply by aung myatsoe on October 17, 2012 at 12:12
Permalink Reply by Pyi Phyo on October 17, 2012 at 13:27
i have to share my friends, thanksalot.
Permalink Reply by War Lay on October 17, 2012 at 13:54
Thanks so much for the post !!!!!
Permalink Reply by khinthidasoe on October 17, 2012 at 16:47
Permalink Reply by tinmaraye on October 17, 2012 at 18:50
Permalink Reply by 18cbsdmi28f7e on October 17, 2012 at 22:05
Permalink Reply by Ohnmar on October 19, 2012 at 11:28
Permalink Reply by Wint Phyo on October 19, 2012 at 12:11
Permalink Reply by 2sdqupr3it4c4 on October 19, 2012 at 15:39
Permalink Reply by Swe Swe M on October 19, 2012 at 20:48
I like to read the lessons like this .
I look forward to reading the lessons like this "Everyday matters ."
Permalink Reply by Penny Wise on February 22, 2013 at 10:45